Dagaal ka dhacay Dayniile oo ay ku dhinteen 23 ruux, iyo dawladda oo sheegtay in ay la wareegtay. – Radio Daljir
Oktoobar 21, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Oct 20 ? Saraakiisha ciidamada dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya oo kaashinaya kuwa AMISOM ayaa maanta sheegay in ay si rasmi ah ula wareegeen degmada Dayniile ee gobolka Banaadir kaddib markii halkaasi ay dagaal xooggan kula galeen malleyshiyaadka Al-shabaab oo muddo deegaankaasi gacanta ku hayey.
Dagaalka lagu qabsaday degmada Dayniile ee gobolka Banaadir oo saakay waabarigii bilawday ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 23 ruux oo iskugu jiray dhinacyadii dagaalkaasi u dhexeeyey iyo dad shacab ah oo rasaas habaw ahi ay haleeshay, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay dad ka badan 38 ruux.
Saraakiisha dawladda ee hoggaaminayey ciidanka federaalka ee la wareegay Dayniile, ayaa sheegay in xididdada u siibeen fariisimadii ugu dambeeyey ee Al-shabaab ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho, waxaana ay intaas ku dareen dadka ku dhintay dagaalkaasi in ay u badan yihiin ururka Al-shabaab, dawlad ahaanna ay aad u kooban tahay khasaaraha soo gaaray.
Dhinaca kale sarkaal u hadlay Al-shabaab oo lagu magacaabo Cabdicasiic Abu-muscab ayaa sheegay dagaalkaasi in ay ku dileen ciidamo badan oo ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa nabad ilaalinta ee ee AMISOM.
Ilo-wareeddo ka madax-bannaan labada dhinac ee ku dagaallamay degmada Dayniile ayaa sheegay ciidanka dawladdu in ay la wareegeen degmadaasi xilli hore oo maanta ah, misna uu dib u bilawday dagaal kale, walina ma cadda caawa sida xaaladdu ku dambaysay.
Ciidanka dawladdu haddii ay la wareegaan degmadaasi Dayniile, waxaa ay ka dhigaysaa Muqdisho meel dhammanteed ay gacanta ku haysto dawladdu, halka ay Al-shabaab-na uga noqonayso goobtii kali ahayd ee ay ka xukumeen Muqdisho oo laga qabsaday.
Xaalad kacsanaan ah ayaa wali ka jirta deegaankaasi maanta lagu dagaallamay, waxaana wariyaashayadu ay soo sheegeen in ay arkeen dad shacab ah oo ka cararaya halkaasi si ay naftooda u badbaadiyaan.
Dhinaca gulufyo colaadeed oo kuwaan oo kale ah ayaa ciidamada dawladdu ka wadaan deegaanno badan oo ka mid ah gobolka Jubbada hoose, kuwaasi oo lagu doonayo qabsashada deegaannada Al-shabaab ay maamulaan ee gobolkaasi.
“Ma jiro wax hishiis ah oo dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo Kenya oo ogolaanaya inay dalka soo galaan, waana tilaabo sharci darro ah” Xildhibaan C/qaadir Sh. Cismaan.